Mpanabe 35 no nahavita ny fiofanana andiany roa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanatanjahan-tena sy ny Kaominina CUA
Mpanabe 35 no nahavita ny fiofanana andiany roa
Nangonin'i RL il y a 2 mois
Lanonana ofisialy nentina namoahana ireo nahavita fiofanana mikasika ny fanentanana ara-panatanjahan-tena sy ho coach no natao teny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny alakamisy 28 janoary lasa teo.
Famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo mpiofana 35 isa avy amin’ny fikambanana eny anivon’ny fokontany, eny anivon’ny boriborintany, no natao. Notsongaina izy ireo. Ny fiofanana natao dia fiofanana mpanentana ara-panatanjahan-tena sy coach sportif izay halefa eny anivon’ny fokontany izay karakarain’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tetikasan’ny kaominina izy ity ary ny Fondation Axian no mpanohana ka ny Académie Nationale des Sports ao Ampefiloha no mpanofana.
Andiany faharoa izao navoaka izao ka 35 izy ireo. Ny andiany voalohany dia tamin’ny volana jiona 2020.
Handeha hampianatra sy hampilalao ary koa hitondra ny hetsika ara-panatanjahan-tena eny anivon’ny fokontany sy ny boriborintany izy ireo. Manao tetikasa dia aseho eny amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina sy ny mpamatsy vola.
Ireo zavatra niofanana
Nampianarina ny fitaizana vatana araka ny fenitra. Eo koa ny fampiasana ireny fitoavana ‘fikotranana’ fampiasan’ny tanora eny anivon’ny fokontany ireny. Nampianarina ny fitantanan-draharaha izy ireo tamin’ny fiofanana, fananganana tetikasa, fomba fitadiavana sponsoring, ny lalana tokony haleha raha hanatanteraka fifaninanana ara-panatanjahan-tena.
Ireo nahavita ny fiofanana hatramin’ny farany no notolorana certificat teny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny 28 janoary teo.
Mihena hatrany ny toerana ahafahan’ny ankizy milalao ao Antananarivo renivohitra ankehitriny. Vokatry ny fitombon’ny mponina izany sy ireo trano miorina. Mila mahay mampiasa ny fotodrafitrasa misy izany ireo nahavita fiofanana ireo. Manabe miaraka amin’ny zava-misy